Waad ku mahadsantahay inaad dooratay Xirfadlayaal Caafimaadka Haweenka uurkaaga iyo dhalmadaada. Anaga oo dadaal ugu jirna sidii aan u yareyn lahayn kharashyada daryeelka caafimaadkaaga, waxaan qaadanay siyaasadaha soo socda. Fahankaaga siyaasadahaani waa muhiim. Fadlan dib u eeg dukumintigan oo la xiriir xafiiska qaansheegadka wixii su'aalo ah ee aad qabto.
Daryeelka Caalamiga ah: Shirkaddaada caymiska ayaa tan ku tilmaamaysa dhammaan booqashooyinka la xiriira uurkaaga booqashadii labaad illaa 6 toddobaad kadib dhalmada, oo ay ku jirto umulintaada. Sidaa darteed, Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka (PWH) waxay hal biil ku dallacayaan tan (booqashooyinka 13-14, gaarsiinta, iyo booqashooyinka qeybta dambe).
Shaybaarada iyo ultrasound-ka looma tixgeliyo inay qayb ka yihiin khidmadaha caalamiga ah waxaana loo qaadaa si gooni gooni ah waqtiga adeegga. Iyada oo ku xidhan caymiskaaga, waxaad masuul ka noqon kartaa qayb ka mid ah kharashyadan.
Saamiga Bukaanka iyo Qorshaha Bixinta OB: Booqashadaada ugu horreysa kadib, shaqaalaha biilasha ayaa laxiriiri doona shirkaddaada caymiska si ay uhelaan dheefaha uurka una xaqiijiyaan wax kasta oo cayiman adeegyada loo baahan yahay. Caymiska qaar ayaa bukaanka uga baahan inuu la xiriiro iyaga si loo diiwaangaliyo uurka kahor. Haddii caymiskaagu u baahan yahay tan, waanu kugula talinaynaa inaad sidaas sameyso.
Qorshaha Bixinta OB: Markaad u yeeraysid dheefaha uurka, caymiskaagu wuxuu nagala talin doonaa qaybtaada khidmadda adduunka. Tan waxaa loogu yeeraa caymiskaaga. Caymiskaaga ayaa noo idmaday inaan uruurino qaybtaan kahor keenista. Nidaamkeenu waa in qadarka lagu leeyahay ay soo ururiyaan Usbuuca 28aad ee uurka. Waxaan abuuri doonnaa iyo Qorshaha Lacag Bixinta OB oo lagu heli doono booqashadaada labaad ee OB. Qorshuhu wuxuu jebinayaa dhammaan macluumaadka aan ka helnay caymiskaaga iyo sidoo kale habka lacag bixinta ee qaybtaada. Waxaan bixinaa xulashooyinkan ku saabsan bixinta:
Bixinta oo dhammaystiran (waa booqashadaada saddexaad)
Lacagta bilaha ah ee waqtiga booqashada, illaa 28 toddobaad
** Fadlan xusuusnow inaad yeelan karto lacag goyn ah oo la buuxin doono. Haddii ay arintu sidan tahay, waxaa laga yaabaa in lagugu soo oogo dacwado dheeraad ah oo adiga mas'uul kaa noqon doona. Waxyaabaha Deyrta laga gooyo horay looma ururin karo. Sheegashooyinka waa inay marka hore maraan caymiska. **
Lacag bixintu: Caymisyada badankood kama qaadaan lacag-bixin hal mar booqasho kasta KA DIB booqashadaada hore.
Waxay sameeyaan, si kastaba ha noqotee, waxay qaadaan lacag-bixinno lacag-bixin ah wixii baaritaan ah ama booqda meel ka baxsan "Daryeelka Caadiga ah ee Uurka" Tijaabinta takhasuska leh, sida baaritaanka aan walbahaarka aheyn, waxay u baahan doontaa lacag-bixinno. Koobiyuhu waxay ku habboon yihiin waqtiga adeegga. Lacagta soo daahay ee ah $ 25.00 waxaa lagu qiimeyn doonaa kuwa aan la bixin waqtiga adeegga.
HRA / HSA / Flex Bixinta: Qorshooyinka sare ee laga jari karo (HRA, HSA, iyo FLEX) waxay ku dhiiri gelinayaan bukaanada inay la wadaagaan masuuliyad dheeri ah sida ay ku baxday qarashka daryeelka caafimaadkooda Tan macnaheedu waxa weeye waxaad heli doontaa qayb badan oo ka mid ah kharashyada daryeelka caafimaadka aad bixiso. Qorshayaashu way ku kala duwan yihiin caymis ilaa caymis taasoo ka dhigaysa mid aan macquul ahayn in lala socdo dhammaan qorshooyinka. Tan awgeed, Xirfadlayaasha Caafimaadka Haweenka waxay u baahan yihiin khidmadda adduunka in la bixiyo bil kasta illaa usbuuca 28aad ee uurka, sida qorshooyinka dhaqameed.
Isbedelada Caymiska: Haddii aad isbeddel ku yeelato caymiska inta aad uurka leedahay, fadlan la xiriir waaxda biilasha isla marka aad hesho dhammaan macluumaadka cusub. Waanu soo wici doonnaa oo waxaan heli doonnaa gargaar, taasoo la micno ah in qorshahaaga lacag-bixinta ay isbeddeli karto. Waan kula socodsiin doonaa dhammaan faa'iidooyinka cusub.
** Qoraal ku saabsan faa'iidooyinka **
Fadlan maskaxda ku hay in kastoo caymiskaagu soo xiganayo waxtarrada uurka, haddana ma jiraan wax damaanad ah oo lacag bixin ah. Caymisku wuxuu tixgeliyaa arrimo badan markii sheegashooyinka la xukumayo ama laga shaqeynayo. Su'aalo kasta oo la xiriira bixinta caymiska waa in lagu hagaajiyaa shirkaddaada caymiska.
Bukaannada Is-Bixi: Si wax looga qabto baahiyaha bukaannadeenna aan caymiska lahayn iyo bukaannada leh xaddidaadaha caymiska, waxaan bixinnaa qiimo dhimis 40% ah oo laga qaado khidmadaha hooyada ee adduunka. Qiima dhimistani waxay qireysaa qiimaha hoose ee ku lug leh biilasha iyo aruurinta marka dalabku aanu u baahnayn in loo gudbiyo bixiye saddexaad. Si aad ugu qalanto, waxaa lagu weydiin karaa inaad la kulanto maareeyaha biilasha si aad ugala hadasho siyaasadeena lacag bixinta iyo dejinta qaabab bixinta.
Ka bixida Tababarka: Haddii ay lagama maarmaan noqoto inaad wareejiso daryeelka inta aad uurka leedahay, Xirfadleyda Caafimaadka Haweenka ayaa ku soo dallaci doona caymiskaaga qaybtooda khidmadda adduunka.
Tubal Ligation (jeermis dhalis) at Delivery: Nidaamyada ka-hortagga taranka waa lacag dheeraad ah. Haddii aad go'aansato inaad ku dhaqaaqdo nadiifinta, waaxda biilasha ayaa la xiriiri doonta caymiskaaga si ay u hesho dheefaha. Adiga ayaa mas'uul ka noqon doona wixii qaddarro wada-caymis ah intaadan umulin ka hor. Xafiiska biilasha ayaa kula soo xiriiri doona marka dheefaha la helo.